ဘဝ – The Only Way To Go!
ဒီနယ်မြေ ဒီ အပိုင်းအခြားထဲမှာ ရောင်စုံလူများရဲ့ စကားသံများ .. ကျယ်လောင်ခြင်းတဖုံ တိုးတိုးတိတ်တိတ် တဖုံနဲ့ အာဃာတ ဒေါသတွေ ဖုံးကာချ ကိုယ့်အရေးသာ ကိုယ်ကြည့် အများအရေးကို ထည့်မရှုနဲ့ တစ်ဘို့တည်းသွား ထင်ရာစိုင်းနေကြတာ အဲ့ဒီအချိန် အဲ့ဒီကာလ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့စကား ဘုရားချေးထက်တောင် ရှားတတ်နေပါလိမ့်မယ်…။ တနပ်စားရေး … တနေ့ကောင်းစားရေးနဲ့ ရေတိုတွေ … မမြင်ကြစေဖို့ အရှည်ကိုသာကြည့် ပညာတွေရှိကြပါမှ လူ့ရွာစခန်း သာာယာတဲ့လမ်းကို လက်တွဲညီညီ ချီတက်ခြင်းတွေက လှပတဲ့ ပန်းများအဖြစ် .. အလိုလိုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။ လိုရာကို စေနိုင်စေဖို့ တစ်ဦးချင်းရဲ့ … ကိုယ်ပိုင်နားများအား ပညာရှိတွေရဲ့ … စကားသံအောက်မှာ ပညာဓါတ်တွေ လျှံဝေတောက်ပစေ … ဒီကမ္ဘာကြီးလည်း သာယာလှပစေ … တွဲလက်များလည်း … More ငြိမ်ချမ်းရေး အော်သံ
Leaveacomment ငြိမ်ချမ်းရေး အော်သံ
ေလွ်ာက္လက္စ လမ္းတစ္ခု ေသာက္လက္စ ေဆးလိပ္တတို မိုးမလံုတဲ႔ ဒီဇရပ္အိုထဲ ဆက္ေနဖို႔လည္း မေရရာဘူး …….။ ခဲေသးေသးေလး တစ္လံုး ေရျပင္ေပၚ ေရာက္သြားတဲ႔ အခိုက္ ၾကာရွည္ရွည္ ၾကည္႔နုိင္ဖို႔ရာ မေရရာဘူး ……။ အေတြးမတူၾကတဲ႔ ဒီေလာကထဲ သူ႔အျမင္ကိုယ္႔အျမင္ ယွဥ္ၾကည္႔တဲ႔အခါ ညီညြတ္ေၾကေအးဖို႔ရာ မေရရာဘူး ……။ လူနွစ္ေယာက္ ဘဲဥတစ္လံုး … ထမင္းတ၀ိုင္းထဲ ဆံုတဲ႔အခါမွာလည္း .. ညီတူညီမွ် စားတတ္ဖို႔လည္း မေရရာဘူး …..။ မျပည္႔စံုတဲ႔ ဒီဘ၀ထဲမွာ . အခ်ိန္ေတြကုန္လို႔ ေန၀င္သြားျပန္ေတာ႔ နားခိုရာအစစ္ လက္၀ယ္ရရွိဖို႔ရာမွာ မေရရာဘူး …. ။ ဘာေန 24-11-2012
6 Comments မေရရာဘူး
မနက်ခင်းနိုးထလာလို့ … ရောက်လာတဲ့ ဒီနေ့ ငါဘာတွေလုပ်မလဲ စဉ်းစားမိပါသည် ။ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ နေ့တွေမှာ အသုံးမကျခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့သည် ။ စိတ်အလိုမကျခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့သည်။ .. ဒါတွေကို ပြန်စဉ်းစားမိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အပြစ်မြင်မိသည် ။ သို့ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တာတွေက ပြီးခဲ့ပြီ .. ရှေ့ဆက်ရမဲ့ တာဝန်က ကိုယ့်တာဝန် ပဲဖြစ်သည် .. ။ ထို့ကြောင့် ကျနော်သည် ကျနော့်အတွက် တာဝန်အရှိဆုံး လူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ ဒီတနေ့ .. နေ့သစ်ဖြစ်သည် ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာတွေလုပ်ချင်လဲ မေးရပြန်သေးသည် ။ ဘာတွေလုပ်ချင်တာပါလိမ့်ပေါ့ .. ။ ငါ ဒီနေ့ကို သတိတရားနဲ့ နေမယ် .. စိတ်ကောင်းလေးမွေးနေမယ် .. … More ဘဝလှေငယ်
Leaveacomment ဘဝလှေငယ်
72,263 hits ဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႔ျခင္း